စက်ဘီးမတော်တဆမှုများဘယ်လောက်များများဖြစ်ပါသလဲ - စက်ဘီးစီးခြင်း
အဓိက > စက်ဘီးစီးခြင်း > စက်ဘီးပျက်ကျမှုစာရင်းဇယား - ငါတို့သည်အဘယ်သို့ဖြေရှင်းမည်နည်း
စက်ဘီးပျက်ကျမှုစာရင်းဇယား - ငါတို့သည်အဘယ်သို့ဖြေရှင်းမည်နည်း
2015 ခုနှစ်တွင် 45,000 အစီရင်ခံရှိခဲ့သည်စက်ဘီးမတော်တဆမှုယူအက်စ်တွင် ၅၀,၀၀၀ မှအစီရင်ခံခဲ့သည်မတော်တဆမှုများကြိုတင်တစ်နှစ်၌တည်၏။ သို့သော်ဆိုးဝါးအရေအတွက်မတော်တဆမှုများဒီတစ်ချိန်တည်းကာလအတွင်း 12 ရာခိုင်နှုန်းကျော်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ဒီဇင်ဘာ ၁ 2019
(အီလက်ထရောနစ်ဂီတ) - ဒီမှာ။ ၂၀၁၈ Tour de France ရဲ့ Roubaix ဇာတ်စင်ပြီးတဲ့နောက်မနက်မနက်မှာငါတို့ Chamberber မှာရောက်နေတယ်။ ငါတို့အဖွဲ့ EF Drapac ကအဖွဲ့ဆရာဝန် Dr. Kevin Sprouse နဲ့နာရီဝက်လောက်နေခဲ့ရတယ်။ ကီဗင်၊ မင်းရဲ့အချိန်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ယာဉ်မောင်းမှာတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့အများဆုံးဒဏ်ရာငါးခုကဘာလဲ။ နံပါတ်တစ်ကလမ်းပုန်းအောင်းလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ကံမကောင်းတာကတော့မနေ့ကငါတို့မြင်နေတာ။ အခုငါလုပ်နေလုပ်နေတာပဲ။ ၎င်းတို့ကိုကြိမ်နှုန်းအရအဆင့်သတ်မှတ်ရန်ခဲယဉ်းသည်။ အချို့ပရိယာယ်များရှိသော်လည်း၊ ငါအကြည့်အများဆုံးငါးခုကိုလေ့လာမည်။ ဒါကြောင့်လမ်းပေါ်မှာအဖုအပိန့်ထွက်တာ၊ ကော်လာကွန်းအရိုးကျိုးတာ၊ လက်ကောက်ဝတ်ဒဏ်ရာရတာ၊
ဤရွေ့ကားများသောအားဖြင့်နာတာရှည်အလွန်အကျွံသုံးခြင်းဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိပြီးအဆင်ပြေပါကလမ်းပုပ်မှစတင်ခြင်းကိုစတင်ကြပါစို့။ ငါကားမောင်းနေတုန်းကအဲဒါဟာအသေးအဖွဲနဲ့အပေါ်ယံပဲလို့အမြဲတမ်းလှောင်ပြောင်ခဲ့တယ်၊ ငါကစာသားအပေါ်ယံပဲလို့ဆိုလိုတာပါ၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကတကယ်ကိုကြီးလေးတဲ့ပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်၊ အထူးသဖြင့်areaရိယာကြီးကြီးမားမားနဲ့မသက်မသာဖြစ်စေတဲ့အခါမှာ၊ ကားမောင်းတဲ့ပုံစံကိုပြောင်းနိုင်တယ်။ လမ်းကျယ်ပြန့်တဲ့လမ်းကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတယ်ဆိုတာကိုအကြမ်းဖျင်းပြောပြပါ။ - သေချာတာပေါ့၊ လမ်းပေါ်အအေးမိမှုကိုကုသရာတွင်၎င်းသည်ငါနှင့်အတူသယ်ဆောင်သည့်လှည့်ကွက်များ၏အိတ်ဖြစ်သည်။
Omnifix သည်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ဆေးကုန်ချိန်တွင်ဆေးဆိုင်များမှရရှိသောအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့ဖမ်းဆုပ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒါကငါသုံးတဲ့တိပ်တာပါ။ Telfa ပတ်တီးတွေဟာရပ်ကွက်ဆေးဆိုင်မှာအလွယ်တကူရနိုင်တဲ့ချည်မျှင်ပိတ်ကျဲစပဲ။ ခင်ဗျားတို့အရင်ကမြင်ဖူးခဲ့ဖူးတယ်၊ တောက်ပတဲ့ကုတ်အင်္ကျီတစ်ချပ်လိုပဲငါတို့သုံးယောက်ကပiိဇီဝဆေးဆီမွှေးကိုသုံးတဲ့ဒဏ်ရာကိုမကပ်မိနိုင်ဘူး။
US မှာဒီ Neosporin ကိုငါတို့ခေါ်ပါတယ်၊ ဒါကယေဘူယျဗားရှင်းပါ။ ဒါပေမယ့်သင်ကအဲဒီမှာသာသုံးလိုက်ပြီးဒဏ်ရာကိုတိုက်ရိုက်သွားသည် ဒီတော့ဒါကကျွန်တော့်ခုနစ်နှစ်အရွယ်စက်ဘီးစီးတာကိုကြိုက်တယ်၊ သူလဲကျတဲ့အခါငါသူ့ကိုဒူးထောက်ပြီးတံတောင်ဆစ်ပေါ်တင်ခိုင်းတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ကဒီပတ်တီးကိုဝတ်ဆင်တဲ့ peloton ထဲကမြင်းစီးသူရဲတွေနဲ့တွေ့ဖူးတယ်။
ဒူးခေါင်းနှင့်တံတောင်ဆစ်များများပေါ်တွင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့လေးလံစွာအသုံးပြုလိမ့်မည်၊ လေးနာရီမှခြောက်နာရီကြာမြင့်သောခြေထောက်များကိုအဆက်မပြတ်ရွေ့လျားနေသောနေရာများ၊ သို့မဟုတ်ပါက၎င်းသည်ချွေးထွက်လာသည့်အခါလှည့်လည်သွားလာလိမ့်မည်၊ ချွတ်ရုံစိတ်ဆိုးဖြစ်ခြင်းအိပ်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုမှကိုင်ထားပါ။ ဤအရာအားလုံးသည်ဆေးဆိုင်မှသင်ရနိုင်သည်။ အထူးဆေးဘက်ဆိုင်ရာလိုင်စင်သို့မဟုတ်ဘာအရာမှမလိုအပ်ဘဲလွယ်ကူသည်။ ဒါကြောင့် collarbones၊ စက်ဘီးစီးသူများအနေနှင့်ငါတို့ကလာကလာဖိုးချိုးဖောက်သည်အထိသင်သည်စက်ဘီးစီးသူမဟုတ်ကြောင်း၊
ဒါပေမယ့်ဒါကအရမ်းကို (ရယ်တယ်) - ငါ၌ငါ့ဥစ္စာရှိသေး၏။ ဒါဟာအလွန်အဖြစ်များတဲ့စက်ဘီးဒဏ်ရာမဟုတ်လား။ ဟုတ်လား ပထမတစ်ခုအနေဖြင့်ဘာကြောင့်အကြောင်းပြချက်ကိုပြောပြနိုင်ပါသလဲ။ တစ်စုံတစ်ယောက် အခါအားလျော်စွာ၊ လျှပ်စစ်ပြန့်ပွားမှုနှင့်သက်ဆိုင်ပါသလား။
ပြီးတော့လက်တွေကအရက်ဆိုင်တွေပေါ်မှာရောက်နေပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ခရီးထွက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုတစ်ခါတစ်ရံမှာသူတို့ချက်ချင်းပဲမကြာခဏတွေ့ရတတ်သည်။ ပိုလန်များသွားသောအခါများသောအားဖြင့်သင်လဲကျခြင်းနှင့်ဘီးလည်ခြင်းများကိုရှောင်ရှားသင့်သည့်နည်းလမ်းတစ်ခုရှိသည်။ ဘေးဘက်သို့သွားပါ၊ ပင်ကိုလိုအင်ဆန္ဒ၊ တုန့်ပြန်မှုသည်ထွက်ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုစွမ်းအားသည်အထက်သို့ပြောင်းရွေ့သွားမည်ဖြစ်သည်။ မကြာခဏကလိုဘလို (S) ပုံစံဖြစ်သောအရိုးတစ်မျိုးသည်ကွင်းဆက်တွင်အားနည်းချက်ရှိပြီးအက်ကွဲကြောင်း - ဟုတ်တယ်၊ မင်းငါ့ကိုဒီမယုံနိုင်လောက်အောင် ultrasound စက်ကိုပြလိမ့်မယ်။ ဒီအကြောင်းပြောပါ၊ ဒါ --- ဟုတ်တယ်၊ အရမ်းကောင်းတယ်၊ ငါတို့ခရီးစဉ်က 'ငါအဆင့်တိုင်းရဲ့အဆုံးမှာ X-Ray စက်ရှိတာကံကောင်းတယ်။ သူတို့ကလူမျိုးများစွာမှာအဲဒီလိုမလုပ်ဘူး။
Giro ကလုပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကအဲ့လူမျိုးနှစ်ခုပဲလို့ထင်တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါတို့က 'ကျိုးပဲ့နေတဲ့အတွက်ငါတို့စိုးရိမ်တယ်၊ အရေးပေါ်ခန်း၊ ဆေးရုံတစ်ရုံကိုရှာနေတာပဲ။ ဒါဟာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတောင်းဆိုမှုများပါပဲ။ ယာဉ်မောင်း၏ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမှုနှင့်သူ၌ရှိသမျှအရာအားလုံးသည်အချိန်ကြာမြင့်နိုင်သည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကိရိယာများရှိခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိထားသည်။ collarbone ကဲ့သို့သောအပေါ်ယံအရိုးများကိုအလွယ်တကူစစ်ဆေးနိုင်သည့် ultrasound စက်သည်လက်ကောက်ဝတ်များကိုကြည့်ခြင်း၊ လက်နှင့်ကိုင်ခြင်းများကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။ the foot ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်အရာကိုမြင်ချင်သနည်း။ လက်ကောက်ဝတ် - Scaphoid? - Scaphoid အရိုး၊ scaloid အရိုးသို့သွားသော distal radius ကိုကြည့်ရအောင်။
ဒါကြောင့်ဒီ gel က transducer ထဲကထွက်လာတဲ့အသံလှိုင်းတွေကိုအရေပြားဆီကူးစက်စေတယ်။ အရိုးမှတဆင့်သို့မဟုတ်အရိုးဆင်းကျွန်တော်တို့ကိုအဲဒီမှာ cortex ၏ရုပ်ပုံကိုပေးပါ။ ပြီးတော့မင်းကလှပပြီးစဉ်ဆက်မပြတ်ကြည့်နေတယ်၊ ​​ပြီးတော့ငါလှည့်ပတ်သွားလာနေတယ်။
ပြီးတော့ငါတို့ဆင်းသွားပြီ၊ မင်းမှာကျိုးနေတယ်ဆိုရင်အဲဒီမျဉ်းကြောင်းကအဆက်မပြတ်ရှိနေတဲ့နေရာမှာတကယ့်ကိုသိသာထင်ရှားတဲ့မြင်ကွင်းရှိတယ်ဆိုတာသိနိုင်တယ်။ ကီဗင်၊ လက်ကောက်ဝတ်ကနေတစ်ဆင့်ငါတို့ကိုဆက်သွယ်ပြီးလက်ဒဏ်ရာတွေကိုပြောပြနိုင်မလား။ ? - သေချာတာပေါ့၊ ငါတို့ collarbones တွေအကြောင်းပြောပြီးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယာဉ်မောင်းတွေကဆန့်တန်းထားတဲ့လက်နဲ့လှည့်စားပြီးလမ်းလျှောက်သွားတာ၊ collarbone ကအဲ့တာကိုမခံနိုင်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲ၊ ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုခံစားရလဲ။ ဆိုလိုတာကတော့သူတို့ဟာကြမ်းပြင်ကိုထိလိုက်တယ်။ သင်အသားအရေထိခိုက်မှုအန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်လက်ကောက်ဝတ်ရဲ့အရိုးတွေကလက်ကောက်ဝတ်ကိုတွေ့တဲ့နေရာ၊ လက်ကောက်ဝတ်မှာတွေ့ရတဲ့အရိုးသေးသေးလေးတွေကလည်းဒီသားကောင်တွေရဲ့သားကောင်တွေပါ။ ရေတံခွန် အချင်းဝက်ကဒီနေရာမှာလက်မရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့အရိုးဖြစ်တယ်။ လက်လက်ဘက်မှာရှိတယ်။ ပြီးတော့ ulna ကဒီမှာရှိတယ်။
scaphoid အရိုးသည်ဤအပိုင်းအစတွင်အတိအကျနေရာယူထားသောအရိုးသေးငယ်ပြီး၎င်းသည်လည်းမကြာခဏဒဏ်ရာရသည်။ ဒါကြောင့်မြင်းစီးသူရဲပြိုကျတဲ့အခါအရိုးတွေ၊ အရိုးနုနဲ့ရွတ်တွေကိုမကြာခဏကြည့်တတ်တယ်။ ဟုတ်တယ်။ - ဒါကအဲဒီမှာဝန်းရံပြီးတော့လက်၏အခြေစိုက်စခန်းရှိအရိုးရှိ။ - အင်း။ - ဒါပေမယ့်သူတို့ထဲကတချို့ဟာကုသဖို့ခက်တယ်၊ ဒါကြောင့်တစ်ယောက်ယောက်ကသူတို့နဲ့အတူမောင်းမသွားဘူး။
သငျသညျအပြေးထဲကဖြစ်ချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် scaphoid အရိုးလေးကသွေးထဲဝင်လာတာ၊ တကယ်လာတာ၊ သွေးထောက်ပံ့မှုကျဆင်းသွားတာ၊ အရိုးကိုဖြတ်သွားပြီးတော့နောက်ဖက်ဆီကို ဦး တည်သွားတယ်။ သွေးထောက်ပံ့မှုသည်ကုသရန်ခက်ခဲသော်လည်းမဖြစ်နိုင်လျှင်မအောင်မြင်ပါ။ ဤကျိုးပဲ့သောအပင်ငယ်လေးများသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ခွဲစိတ်ကုသမှုခံကြသောကြောင့်သူတို့ကိုစောစောစီးစီးရှာဖွေတွေ့ရှိလိုပါကဒူးထောက်ပါ။
ဒါကစက်ဘီးစီးတာကိုကျွန်တော်မမှားခဲ့မိတဲ့အရာတွေထဲကတစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့် (ရယ်တယ်) - ပြီးပြည့်စုံတဲ့! ဒူးမရှိပါဘူး။ ဒူးခေါင်းဒဏ်ရာရနေတယ်ဆိုတာသေချာတယ်၊ ဒါကြောင့်သင်စက်ဘီးပေါ်ကနေပြုတ်ကျပြီးဒူးကိုထိလိုက်တာဒါပြcomesနာတစ်ခုပဲ။ ဒါပေမယ့်ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ဟမ်? ငါဒူးပိုတာနာတာရှည်အလွန်အကျွံဒဏ်ရာသို့မဟုတ် positioning ကိုနှင့်အတူပြaနာတစ်ခု၏သားကောင်ဖြစ်ခြင်းကိုကြည့်ပါ။
များသောအားဖြင့်တော့နှစ်မျိုးလုံးပါ။ ကုသမှုအကြောင်းရင်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ပြီးတော့မကြာခဏဆိုလိုတာကနောက်ပြန်လှည့်ပြီးသူတို့လှုပ်ရှားမှုများကိုကြည့်ခြင်း၊ သူတို့ရဲ့အင်အားပုံစံများကိုကြည့်ခြင်း၊
သူတို့ခြေထောက်တွေကိုပြောင်းလိုက်ပြီလား။ သူတို့ကုန်းနှီးအမြင့်ကိုပြောင်းပြီးပြီလား များသောအားဖြင့်သူတို့သည်ဤအရာများကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့်မပြုလုပ်ခဲ့ကြသောကြောင့်သူတို့သည်အဝေးသို့ ထွက်၍ အိမ်တွင်စက်ဘီးကိုပြန်လာခဲ့ကြပြီးထိုင်ခုံခုံကိုလည်းအနည်းငယ်ချော်ထားသည်။ ၎င်းတို့ကို၎င်းတို့တိုင်းတာသည်။ အောက်ဘက်သို့မဟုတ်လက်မသို့မဟုတ်မည်သည့်အရာကိုမဆိုဒူးပေါ်တွင်ဖိအားဖြစ်စေသောကြောင့်၎င်းသည်အဘယ်ကြောင့်နာကျင်ရသနည်း - Kevin, Concussion၊ ကျွန်ုပ်အားလုံးကောင်းစွာမှတ်မိသည်။ အရမ်းမသက်မသာပါပဲ ရောဂါလက္ခဏာအကြောင်းပြောပါ။ ထို့နောက်သင်သည်ပြင်းစွာထိခိုက်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်အတူမြင်းစီးသူရဲနှင့်မည်သို့ပြုမူသည်ကိုပြောပါ။ ထို့ကြောင့်ပြင်းစွာထိခိုက်လှုပ်ရှားခြင်းသည်စက်ဘီးစီးသူများကိုအကျိုးသက်ရောက်သည့်အရာဖြစ်ပြီး၎င်းသည်နှစ်တစ်နှစ်လုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရပြီး၊ လွန်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်ကဆယ်နှစ်လောက်ကျတော့ငါတို့ယောက်ျားတွေအလေးအနက်ထားရမယ်။
ကျွန်တော့်ပညာရေးမှာတော့ပြင်းစွာထိခိုက်လှုပ်ရှားခြင်းရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနဲ့ကုသမှုဟာပညာရေးဆိုင်ရာပဟေlesိများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အဓိကအာရုံစိုက်ထားသည့်အပိုင်းတစ်ခုရဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ စက်ဘီးစီးခြင်းတွင်ဤအချက်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်ကိုသင်မြင်ရပြီ၊ ဤ protocol များကိုကျွန်ုပ်တို့အကောင်အထည်ဖော်နေသည်၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့စတင်သဘောပေါက်လာသည်။ ၎င်းကိုသတိပြုမိရန်မှာလည်းခက်ခဲနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပြင်းစွာထိခိုက်လှုပ်ရှားခြင်းကိုရှာဖွေခြင်းသည်စမ်းသပ်မှုမရှိသောကြောင့်စမ်းသပ်မှုမရှိဟုဆိုလိုသည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကပြင်းစွာထိခိုက်လှုပ်ရှားခြင်းရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြသည်။ သင်သည်၎င်းတို့ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေး။ မရပါ၊ သွေးစစ်ဆေးမှုမလုပ်နိုင်ပါ၊ ထို့နောက်၎င်းသည်သူတို့၏ဟန်ချက်ကိုစစ်ဆေးရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်၊ ၎င်းသည်သူတို့၏မှတ်ဥာဏ်နှင့်မှတ်ဥာဏ်ကိုကြည့်ပြီးသူတို့ပြောနေသည့်လက္ခဏာများကိုကြည့်သည်။
ဒါကြောင့်တစ်နည်းပြောရရင်သူတို့ပြောတာကိုသူတို့သဘောပေါက်မှာပါ။ - ဆရာဝန်တစ် ဦး အနေဖြင့်၊ မည်သည့်ရောဂါလက္ခဏာကိုမဆိုအဆုံးသတ်ရန် (သို့) အနည်းဆုံးအချိန်ဖိအားအောက်တွင်ပထမ ဦး ဆုံးရောဂါရှာဖွေရန်ကြိုးစားရန်အလွန်ခဲယဉ်းရမည်။ ကြည့်ရှုသူများသင်၏အလိုလိုလုပ်ခြင်းသည်ထင်ရသလောက်၊ အကယ်၍ သင်သည် Grand Tour သုံးရက်တွင်တစ်ယောက်ယောက်ကိုဆွဲထုတ်ပြီး၎င်းတို့ပြုလုပ်ပါကဘာဖြစ်မည်နည်း။ ပြင်းစွာထိခိုက်လှုပ်ရှားခြင်းမရှိပါ မင်းခေါင်းကိုထိလို့ဖြစ်လို့မင်းမလုပ်နိုင်ဘူး၊ အသင်းနဲ့ဒရိုင်ဘာကိုမတရားဘူး။ ဟုတ်ကဲ့ safe.- ကကစားလိမ့်မယ်။ - အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုရှိလျှင် - ဟုတ်ကဲ့။ တစ်ခုခုမှားယွင်းနေလျှင်လုပ်မိပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုပြင်းစွာထိခိုက်လှုပ်ရှားခြင်းမရှိဘဲဆွဲဆောင်ခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်ပါကကျွန်ုပ်မလုပ်သင့်သော်လည်းကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချလိုက်ပါမည်။
1x drivetrain လမ်းဆိုင်ကယ်
အခုငါ့မှာစားလိမ့်မယ် (ရယ်တယ်) - ဟုတ်တယ်။ ငါတို့ဟိုတယ်ကိုပြန်ရောက်ရင်အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ငါကိုယ်တိုင်ကန်တယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုငါပြန်ထည့်ပြီးတခြားအကြောင်းပြချက်တွေကြောင့်ငါ့ကိုကန်လိုက်တာထက်ငါဟာငါကိုယ်တိုင်ပဲ။ - ဟုတ်သည် - ပြင်းစွာထိခိုက်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားလှည့်စားသောအရာမှာအများအားဖြင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်သည်။ - ဟုတ်ပါတယ်။ ငါ့အတွေ့အကြုံအရမြင်းစီးသူရဲကသူဆင်းသွားပြီးခေါင်းကိုဝင်ပြီးစက်ဘီးပေါ်ရပ်ပြီးချက်ချင်းပြင်းစွာထိခိုက်လှုပ်ရှားခြင်းလက္ခဏာကိုပြတယ်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မြင်းစီးသူရဲများမြင်တွေ့ရလေ့ရှိသည့်အများဆုံးဒဏ်ရာများမှာလမ်းဘေးအပြောင်၊ ကလာပ်ရိုးကျိုးခြင်း၊ လက်ကောက်ဝတ်ဒဏ်ရာများ၊ ပြင်းစွာထိခိုက်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်ဒူးနာခြင်းများဖြစ်ဖွယ်ရှိပြီး၎င်းသည်အပန်းဖြေစက်ဘီးစီးသူအများစုအတွက်လည်းအလားတူဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ ။ မင်းဒီစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့မင်းထင်တယ် ကီဗင်, တဖန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှင့်ကျန်ခရီးစဉ်များအတွက်ကံကောင်းပါစေ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင်ဤဆောင်းပါးကိုကြိုက်လျှင်, ကျွန်တော်တို့ကိုလက်မပေး, Subscribe ကိုနှိပ်ပါနှင့်ပိုမိုသောခရီးစဉ်အကြောင်းအရာဒီမှာနှိပ်ပါ။
၈၄၀ အမေရိကန်စက်ဘီးစီးအသတ်ခံရမော်တော်ယာဉ်များနှင့်တိုက်မှုများတွင် 2016 ခုနှစ်တွင်နှစ်ခုထက်သာ။ ကြီးမြတ်ကိုယ်စားပြုသည်သေဆုံးမှုတိုင်းတစ်ယောက်တည်းနေ့။ ဤရွေ့ကားသေဆုံးမှုစုစုပေါင်းသေဆုံးမှု၏ 2.2 ရာခိုင်နှုန်းကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ ထိုအရေအတွက်သည် ၂၀၁၅ မှ ၈၂၉ အထိတိုးပွားလာခဲ့သည်လူများခဲ့ကြသည်အသတ်ခံရ။ဇန်နဝါရီ ၁၇ 2021
လူအများ။ ငါစက်ဘီးကုန်းနှီးကိုကြည့်ခြင်းနှင့်မသက်မသာဖြစ်ရပါမည်မသာပေမယ့်သင်တို့အဘို့လည်းဖြစ်ကောင်းဆိုးနိုင်ထင်ပါတယ်သေချာပါတယ်။ သင်သိသည် - ပျက်စီးခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း၊ ထုံခြင်းနှင့်ယောက်ျားများတွင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၊ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်သည်။
သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်စက်ဘီးစီး။ လုံးဝပြproblemsနာမရှိပါ။ အချို့စက်ဘီးစီးသူများ၊ ငါရှိသည်, ဒါကြောင့်ငါတစ်ခုခုဖြစ်ပျက်အခါကယ့်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းသင့်အားပြောနိုင်ပါတယ်။
ကြည့်ပါ၊ ဤသူကားငါ၏ဘုရား၊ ငါ့လိင်တံလုံးဝထုံသွားပြီ! အမျိုးသားများ၏ကျန်းမာရေးနှင့်စက်ဘီးစီးခြင်းကိစ္စရပ်များကိုလေ့လာသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာကိုပြန်သွားကြမည်။ ဤသို့ပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အထီးကျန်စက်ဘီးစီးသူအားလုံးနားထောင်သင့်သည့်ခိုင်လုံသော၊ လက်တွေ့ကျသောအကြံဥာဏ်ပေးရန်ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ ဦး ဆောင်သောဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါဗေဒပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်သည့် Anthony Koupparis နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ သူကသူဟာသံမဏိသူဖြစ်ပြီးဒီလူတွေကကုန်းနှီးမှာအချိန်အများကြီးကုန်ကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့မစတင်ခင်မှာခန္တာကိုယ်ဗေဒသင်ခန်းစာပါ။
ဒါကငါ့စက်ဘီးစီးတာပဲ။ ယခုသူသည်စက်ဘီးစီးနေသည့်အရိုးစုဖြစ်ပြီး ပြီးပြီ လိင်တံ၏အနီးကပ်ပုံဖြစ်သည်။
နောက်ကျောတွင် giggling ကိုရပ်တန့်။ ဒါဟာစကေးမှကောင်းသောမဟုတ်သလိုစစ်မှန်တဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘေးဖယ်ထားတယ်၊ ငါတို့ကိုယ်ပိုင်ခန္ဓာဗေဒကိုနားလည်ဖို့တကယ်အရေးကြီးတယ်။
မင်းသိလိမ့်မယ်မင်းရဲ့လိင်တံနဲ့ ၀ တ္ထုတွေကိုပုံမှန်အားဖြင့်ဝှက်ထားလေ့ရှိတာသေချာတယ်။ သင်၏တင်ပါးနှင့်သုက်ပိုးများအကြားပျော့ပျောင်းသောတစ်ရှူးyourရိယာကိုသင်၏ perineum ဟုခေါ်သည်။ သင်စက်ဘီးစီးနေစဉ်ဤဒေသသည်သင်၏ကုန်းနှီးနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိသည်။ အရေပြားအောက်မှာသင့်ရဲ့ urethra ဆိုတာဆီးအိမ်ကနေတဆင့်သင့်ရဲ့ဆီးအိမ်ကိုပြင်ပကမ္ဘာနဲ့ဆက်သွယ်ပေးတဲ့ပြွန်ဖြစ်တယ်။
Perineum သည်ကြီးမားသောသွေးကြောများနှင့်သင်၏ pudendal အာရုံကြောများတည်ရှိရာနေရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်areaရိယာ၏ခံစားချက်ကိုပေးသောကြောင့်ထုထည်ကိုအထောက်အကူပြုသည်။ Perineum ရဲ့အထက်မှာသင့်ရဲ့ဆီးကျိတ် - ဆီးကြိတ်အရည်ကိုထုတ်လွှတ်ပေးတဲ့ urethra ကိုဖြတ်ကျော်တဲ့ဂလင်းတစ်လုံးရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာဗေဒနှင့်ကုန်းနှီးပုံသဏ္Givenာန်ကြောင့်စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်နာကျင်မှုသို့မဟုတ်ထုံထိုင်းခြင်း၊ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆီးကျိတ်ပြproblemsနာများအကြားဆက်စပ်မှုကိုလုပ်ရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပုံရသည်၊ သို့သော်၎င်းကိုအသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ကြစို့။
ဒါပေမယ့်စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး သင်မြင်တွေ့ခဲ့သည့်အရာများထက် ပိုမို၍ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမရနိုင်ပါ၊ ထိုအကြောင်းအရာကိုဖြိုဖျက်ရန်အန်သိုနီအားသူတို့အကြံပြုသည်။ အထူးသဖြင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာလည်းရှိတယ်။
နားမကြားခြင်းနှင့် ဦး စွာစတင်ကြပါစို့၊ ကျွန်ုပ်ပြောနိုင်ပါသလား။ မင်းငါ့ထုံနေတဲ့လိင်တံပုံပြင်လား။ - ဟုတ်ကဲ့၊
ငါတို့အချင်းချင်းတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ကောင်းကောင်းသိကျွမ်းတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ငါ Indianapolis ရှိလေရဟတ်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းထဲ၌ရှိစဉ်ကကျွန်ုပ်သည် wind tunnel test လုပ်နေစဉ်တွင်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါသင်၏စက်ဘီးသည်လေတိုက်ထောင့်များကိုအပြည့်အဝလှည့်လည်နေစဉ်သင်စက်ဘီးပေါ်တွင်ညင်ညင်သာသာထိုင်ရန်လိုသည်။ ဆိုလိုတာကမင်းရဲ့အထက်ခန္ဓာကိုယ်မှာလုံးဝရွေ့လျားနေရမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမျိုးမျိုးသောတွန့်လိမ်မှုကရလဒ်ကိုပျက်ပြားစေလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်စက်ဘီးစီးရန်တကယ်ပင်အတုအခြေအနေပါပဲ။ မိနစ် ၃၀ အကြာမှာကျွန်တော်ထွက်လာပြီးလိင်တံမှာအာရုံခံစားမှုလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာချက်ချင်းသဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကံကောင်းတာကသင်အာရုံပြန်ရောက်လာပြီဆိုတာသင်ကံကောင်းတာပဲ။ ဒီတော့တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးသွားရင်ရေရှည်မှာဘာမှဖြစ်မလာသေးဘူး၊ ဒါပေမယ့်ရေတိုမှာဘာဖြစ်မလဲ။ အခြေခံအားဖြင့်သင် perineum အပေါ်တိုက်ရိုက်ဖိအားများကြောင့်သင်အာရုံကြောများကို နှိပ်၍ သွေးကြောအချို့ကို နှိပ်၍ သွေးကြောများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အာရုံကြောတစ်ခုပေါ်တွင်ထိုင်နေသောအချိန်ကာလအနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်၎င်းသည်ရေရှည်ပျက်စီးမှုမဟုတ်သောအလွန်သေးငယ်သောပျက်စီးမှုကိုဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့်သင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်inရိယာ၌ထုံထိုင်းစေသည်။
ဒါကြောင့်သူကထူးဆန်းတဲ့အနေအထားမှာအိပ်ပျော်သွားပြီး၊ သင့်လက်တွေလုံးလုံးလန်းလန်းလန်းလန်းနိုးလာတာနဲ့တူတယ်။ အရမ်းစိတ်ရှုပ်ထွေးနေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ဒီခံစားချက်ကတော်တော်လေးမြန်လာပြီးရေရှည်ထိခိုက်မှုလည်းမရှိဘူး။ အရမ်းညာဘက်ကြောင်းအလွန်ဆင်တူသည်။ သို့ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့ပြုရမည်နည်း။ စက်ဘီးစီးပြီးတဲ့နောက်ငါတို့နားမကြားတဲ့ရောဂါခံစားနေရတယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးဝင်ပေါက်ဆိပ်ကမ်းကဘာလဲ။ ဤအရာကိုသင်တွေ့ရှိပါကစက်ဘီးပေါ်သို့တက်ပြီးနောက်မှထုံနေလိမ့်မည်။
ငါဟာငါသိတယ်၊ မင်းမှာသင့်တော်တဲ့စက်ဘီးတစ်စီးနဲ့တစ်ယောက်ယောက်သင့်ရဲ့ကုန်းနှီးနဲ့အတူသူနဲ့ပတ်သတ်တာကိုကြည့်ဖို့သင်ရတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏စက်ဘီးကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာစီးနင်းနိုင်ပြီး၎င်းနယ်မြေတွင်ထုံထိုင်းပြီး၎င်းသည်ထုံနေပြီးထပ်တူထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်လျှင်သင်မလွှဲမရှောင်သာရေရှည်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုဖြစ်စေနိုင်သော်လည်းသာမန်အသိသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကြာတတ်သည် ကိုယ့်လက်ျာစက်ဘီးမထိုက်မတန်နှင့်ကုန်းနှီးရပါဘူး။ ထုံပြီးသောကာလတစ်ခုအနေဖြင့်ဤinရိယာအတွင်းရှိခံစားမှုသို့မဟုတ်မည်သည့်စိုက်ထူမှုမျိုးနှင့်မဆိုရေရှည်ပျက်စီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေမည်မဟုတ်ပါ။
ထိုအခါလာမည့်ခေါင်းစဉ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်ကျနော်တို့ထုံအကြောင်းကိုကြားသိသောအရာကနေ, စက်ဘီးစီးခြင်း, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကို ဦး တည်ကြောင်းထပ်ခါတလဲလဲထုံခြင်းအကြား link တစ်ခုရှိပါသလား - အဖြေမရှိပါ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အရေးကြီးမှုဖြစ်သည်။ erectile ပြproblemsနာများသို့ ဦး တည်စေသောဖြစ်စဉ်များသည်နှလုံးရောဂါဖြစ်စေသောနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါဖြစ်ပေါ်စေသောဖြစ်စဉ်များနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်သင်၌ဆီးချို၊ သွေးတိုး၊ သို့မဟုတ်ဆေးလိပ်သောက်လျှင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြစ်သော်လည်းနှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်သည်။ အမှန်မှာလူလတ်ပိုင်းလူအများစုသည်စက်ဘီးစီးခြင်းကိုစတင်ကြလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်ယခုစက်ဘီးစီးနေပြီးအသက်အရွယ်ကြီးရင့်သော Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်နေပါကစက်ဘီးစီးခြင်းကြောင့် 'အိုး၊ ဒါကငါ့ရဲ့ကုန်းနှီးပဲ' ဟူ၍ သင်၏ပထမဆုံးအတွေးမဖြစ်သင့်ပါ။ “ ဖြစ်သင့်တယ်၊ ငါခေါင်းကိုသဲထဲမှာမသင်္ဂြိုဟ်တော့ဘူး၊ ဒါကရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိမှုမရှိသေးတဲ့အရာတခုဖြစ်တယ်။
သင့်ရဲ့ဆီးခုံမို့မို့အာရုံကြောကိုပျက်စီးစေနိုင်တဲ့အမျိုးအစားကိုစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီတော့အဲဒါကိုလုပ်ဖို့အတော်လေးခက်ခဲပါသလား။ သင့်ရဲ့ perineum ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသောထူးဆန်းတဲ့ထုံဆေးကသင့်အား erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သွားကြည့်ပါ။
ပထမ ဦး စွာနှလုံးအမြင်အရသင့်တော်သော MOT တစ်ခုရရှိရန်အတွက်အဘယ်ကြောင့်စိုက်ထူခြင်းပြproblemနာကိုကုသစရာမလိုသနည်း။ ဆိုလိုတာကစက်ဝိုင်းကပြည့်နေပြီ။ ၎င်းသည်အနည်းငယ်ပြတ်တောက်သွားသောအရာမှသင်ထွက်ပြေးလာနိုင်သောတကယ့်ကျန်းမာရေးပြproblemနာသို့သွားခဲ့သည်။ ပြီးတော့သူတို့ကိုတွေ့လိမ့်မယ်။
အထူးသဖြင့်ဆီးကြိတ်နှင့်သက်ဆိုင်သောပြproblemsနာများနှင့်အထူးသဖြင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကော။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, စက်ဘီးစီးခြင်းဆီးကျိတ်ကင်ဆာအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။ ဒါပေမယ့်ဒါဟာဆီးကြိတ်ကင်ဆာဘယ်လိုဖြစ်ထွန်းတယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါဟာသင်ဟာဆီးကျိတ်ကင်ဆာအတွက်မသင့်တော်တဲ့စစ်ဆေးမှုခံထားရမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းပါဘဲ။
ဆီးကျိတ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုညွှန်ပြရန်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောအရာများထဲမှတစ်ခုမှာသွေးစစ်မှုဖြစ်သည်။ သင်များစွာသံသရာလည်ပါကသင်၏ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်သင်၏ PSA ဟုခေါ်သည့်သင်၏သွေးစစ်ဆေးမှုဖြစ်နိုင်သည်ဟုယူဆနိုင်သည်။ မြင့်မားသောသွေးစစ်ဆေးမှုသည်ဆီးကျိတ်၏တိကျသော antigen သွေးစစ်ဆေးမှုကိုသင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတိုင်းသွေးကြောဆိုင်ရာအဆင့်အတန်းမြင့်တက်လာခြင်းသို့ရောက်သည်နှင့်သင်၌စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်မမှန်သောကြောင့်သင်တစ်ခါမျှမလိုအပ်သောစမ်းသပ်မှုများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ အခွင့်အလမ်းနည်းနည်းလောက်ထိခိုက်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်များစွာသောဓာတ်ခွဲခန်းအခြေပြုသုတေသနကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်၊ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ၊ စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းအတွက်မော်လီကျူးအမှတ်အသားများစွာဟာဆီးကျိတ်ကင်ဆာရဲ့အညွှန်းကိန်းတွေနဲ့မကိုက်ညီတာကြောင့်စက်ဘီးစီးတာကောင်းတယ်။ ထို့အပြင်သင်၏နှလုံးနှင့်သွေးကြောဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည့်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကိုလျှော့ချပေးသည်။ ၎င်းသည်မသင့်လျော်သောဆီးကျိတ်ကင်ဆာစစ်ဆေးမှုကိုမထိခိုက်စေဘဲဆက်လက်ပြုလုပ်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ၏အဘယ်သူမျှမမြင့်မားတဲ့အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ ယောက်ျားတွေအနေနှင့်ငါတို့လုပ်သင့်သည်များကိုစဉ်းစားပါ။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြီးလာတာနဲ့အမျှဆီးကျိတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်လာနိုင်တယ်။ ပထမဆုံးသင်လုပ်သင့်သည်မှာယခုရောဂါလက္ခဏာအချို့ကိုသတိပြုရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သတိပြုရမည့်အချက်များမှာရေအလုပ်လက္ခဏာများ၊ ခါးနာခြင်း၊ ရေတွင်သွေးထွက်ခြင်းနှင့်အခြားအရာများ၊ သင်စိုးရိမ်လျှင်ဖြစ်သည်။ ဤအရာများ၊ အကယ်၍ သင်သည်ဤအရာများကိုထပ်မံတွေ့ကြုံခံစားပါက၊ ထို့နောက်သင်သည်ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာ ၀ န်သို့မဟုတ်မိသားစုဆရာဝန်နှင့်တွေ့သင့်ပြီးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်သင့်သည်။ သင့်ကိုဆီးကျိတ်ကင်ဆာစစ်ဆေးရန်စစ်ဆေးလိမ့်မည်ဟုအလိုအလျောက်မဆိုလိုပါ၊ သို့သော်ထိုဆရာဝန်ကသင့်အားစာမေးပွဲ၏ကောင်းမွန်သောအရာများနှင့်စာမေးပွဲ၏အားနည်းချက်များကိုဖြတ်သန်းသွားလိမ့်မည်။
ထို့နောက်သင်နှစ်ယောက်စလုံးသည်ဆက်လက်မသွားမနေဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ယောက်ျားတွေကအဲဒါကိုလုံးဝလျစ်လျူရှုမထားချင်ဘူး။ နှင့်အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်, ဒီနေ့အစောပိုင်းကအများကြီးဤအရာတို့ကိုရှာတွေ့သူတို့လုံးဝခွဲထားနိုင်ပါတယ်။
ဒီမှာဘယ်အသက်အရွယ်အကြောင်းပြောနေတာလဲ။ ဘယ်အသက်အရွယ်ကိုသင်ပူပန်သင့်သလဲ။ ထိုအခါငါသင်သိသောကြေကွဲဖွယ်ဥပမာများဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အစောပိုင်းဖြစ်ပွားမှု, ဒါပေမယ့် သင်မှန်ဖြစ်ကြသည်ကိုငါတန်ဖိုးထားတယ်။
ဒါကြောင့်ငါ့ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းထဲမှာငါအရမ်းပုံပျက်နေတယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့မှာဒီလိုလေ့ကျင့်မှုကြီးကြီးမားမားရှိတယ်၊ သင့်ရဲ့အသက် ၃၀ မှ ၈၀ အတွင်း ၈၀ နှင့် ၉၀ အတွင်းလူနာများကိုစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ သင့်မှာစိုးရိမ်စရာရောဂါလက္ခဏာများမထိတ်လန့်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့် ဦး ဆောင်ခြင်းတို့ကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဆွေးနွေးပါ။ ပြtheနာကဘာလဲ၊ အနီရောင်အလံတွေပေါ်လာရင်၊ မင်းတို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်စက်ဘီးစီးခြင်းနဲ့ဆီးကျိတ်ကင်ဆာအကြားဆက်နွယ်မှုမရှိဘူး၊ ဒါပေမဲ့ဆီးကြိတ်ကင်ဆာဟာများသောအားဖြင့်စက်ဘီးစီးသူများအတွက်ပြbigနာကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်၊ သူတို့တွေဟာလူလတ်ပိုင်းအရွယ်တွေပေါ့။ ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ မင်းအကြောင်းကိုငါမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲန်တိုနီနဲ့ဒီအကြီးအကဲကငါနဲ့အတူစကားပြောတာကငါတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောမထားသင့်ဘူး၊ ငါတို့ပါးလွှာတဲ့ gs မရလို့အကူအညီလိုတယ်။ ငါတို့အားလုံးရင်ဆိုင်ရမယ့်အကြီးမားဆုံးပြproblemနာဖြစ်နိုင်တယ်။ ငါလေလေဥမင်လိုဏ်ခေါင်းထဲရှိကျွန်ုပ်၏ထုံနေသည့်လိင်တံအကြောင်းပြောပြတဲ့အခါသတင်းအချက်အလက်အနည်းငယ်မျှသာငါပေးခဲ့တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည် hav ဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ် စကားစမြည်ပြောဆိုခြင်း - ကလပ်မှာသူငယ်ချင်းတွေဒီတနင်္ဂနွေကိုအပြေးလုပ်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးဒီဆောင်းပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားပြောလို့ရမယ်၊ ဒါကစတာအပြုသဘောဆောင်တဲ့နေရာဖြစ်လိမ့်မယ်။ အခုလည်း ကျေးဇူးပြု၍ အန်သိုနီအားသူ၏အချိန်နှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်မျှဝေခြင်းအတွေ့အကြုံအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူတူခေါင်းစဉ်တူအခြားဆောင်းပါးကိုတွေ့လိုလျှင်ကျေးဇူးတင်ရန်ကျွန်ုပ်ကိုလက်မထောင်ပါစေ။
နားမကြားသူများပထမဆုံးပြfirstနာကိုရင်ဆိုင်နိုင်ရန်သင့်တော်သောကုန်းနှီးကို ၀ ယ်ရန်သင့်အားကူညီပေးမည့်ဤချန်နယ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တစ်ခုသာရှိသည်။
Onပျမ်းမျှအား, 742စက်ဘီးစီးဆိုးဝါးအတွက်သေဆုံးလျက်ရှိသည်စက်ဘီးမတော်တဆမှုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း။ Federal Highway Administration (FHWA) အရသိရသည်။ 2007 ကနေ 2018 ခုနှစ်, 8,908 ရန်စက်ဘီးစီးရှိသည်သေပြီယူအက်စ်တစ်လွှားကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုနံပါတ်ကိုယူပြီး ၁၂ ဖြင့်ပိုင်းလိုက်သည်ပျမ်းမျှအား။
မဂ္ဂဇင်းအပြင်ဘက်၌တံစို့2020စက်ဘီးစီးသေဆုံးမှုများယနေ့အထိ ၆၇၅ ခုရှိသော်လည်း COVID-19 သည်လမ်းကြောင်းအတိုင်းဖြတ်သန်းသွားသည်အများကြီးဘလွန်းဘာ့ဂ်၏အဆိုအရလတစ်လတွင် ၄၁ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိသည်ဟုဆိုသည်။12.22.2020
အချို့သောလူများသည်စာအိတ်ကြီးကြီးမားမားကိုတွန်းအားပေးခြင်းနှင့်အတူပါလာသည့် adrenaline အလုအယက်ကိုလိုက်ရန်မရပ်တန့်ကြပါ။ ရူးသွပ်စွာတွန်းလှန်မှုများကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသော ၀ မ်းနည်းဖွယ်ကောင်းသောလူဆိုးများကိုကြည့်ပါ။ လူအများကထူးဆန်းသည့်တန့်များပြုလုပ်နေခြင်းကိုလူများကြည့်ရှုလိုသည့်ဆန္ဒကသာဘန့်တောင့်တင်းသောအိပ်မက်များကိုအိပ်မက်မက်နိုင်သည့်လူသားစွမ်းရည်ကိုကျော်လွန်သွားနိုင်သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင်မလေးရှားမှော်ပညာရှင် Lim Ba သည်စပါးနှင့်ပြောင်းဖူးများဖြင့်အလွန်တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကိုကြိုးစားခဲ့သည်။ Lim သည်ဤအထူးတန့်ကိုဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာအောင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဘဝထက်ပိုမိုကြီးမားသောဘ ၀ ၌ ၇၅ မိနစ်စံချိန်တင်ထားသည်။ သို့သော်နတ်ဝိဇ္ဇာဆရာသည်အသက် ၇၀ သို့ချဉ်း ကပ်၍ သွေးပေါင်ချိန်မြင့်မားမှုအတွက်ကုသခံနေရသည်။ နှင့်မကြာသေးမီကနှလုံးရှောင်ကွင်းခဲ့သည်။
ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး၊ သူသေဆုံးချိန်မှာသူဟာရုပ်ပိုင်းအရအကောင်းဆုံးမဟုတ်ခဲ့ပါ။ ဖျော်ဖြေမှုအပြီးမိနစ် ၃၀ ခန့်တွင် Lim သည်အတွင်းပိုင်းကိုခေါက်သည်။ မျက်နှာဖုံးကိုဖယ်လိုက်သောအခါပရိသတ်ကသူ့ကိုသတိလစ်သွားသည်။ ဆေးကုသမှုဌာနသို့ရောက်သည့်အချိန်တွင်လင်မ်ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။
သေဆုံးရသည့်တရားဝင်အကြောင်းရင်းမှာနှလုံးရောဂါဖြစ်သော်လည်းရဲသည်ဒုတိယမြောက်ဒီဂရီမီးလောင်မှုကိုခံစားခဲ့ရကြောင်းရဲများကတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Kirk Jones: နိုင်အာဂရာရေတံခွန်နှင့်ပတ်သက်ပြီးတစ်စုံတစ်ရာသည်သေစေနိုင်သောအောင်မြင်မှုနှင့်တူညီသောအချိုးအစားသုံးခုကိုတစ်ပြိုင်နက်အချိုးအစားရှိသော်လည်းရဲရင့်သော ၀ န်ထမ်းများအားလှုံ့ဆော်ပေးသောအရာတစ်ခုရှိသည်။ ရေတံခွန်ကိုကျော်။ ကားတစ်စီးမောင်းရန်ကြိုးစားခဲ့သောရဲရင့်သူများအနက် ၁၆ ယောက်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီးခြောက် ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း Horseshoe ရေတံခွန်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ဖို့ရွေးချယ်သူဒါဇင်ဒါဇင်မပါ ၀ င်ပါဘူး။ ၁၈၅၀ ခုနှစ်ကတည်းကရေတံခွန်ရဲ့အောက်ခြေကအလောင်း ၅၀၀၀ ကျော်ကိုလည်းပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ စေတနာ။ အာဏာပိုင်များက Kirk Jones ၏အလောင်းကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂ ရက်၊ ရေအောက်တွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ သို့သော်သူ၏ခုန်ပေါက်ကွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကမျှမသိခဲ့ပါ။ Aprilပြီလတွင်ရဲများသည် 'ထိုးဖောက်နိုင်သောဘောလုံး' ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ရဲများကဂျုံးစ်၏ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် ဂျုံးစ်သည်နိုင်အာဂရာရေတံခွန်ကိုယုံကြည်ပါဟုတီရှပ်များရောင်းသော Kirk Jones Niagara Falls Daredevil ဟုခေါ်သည်။ 'မြူဆိုင်းသောဂျုံးစ်သည်သူနှင့်အတူဂျွန်ဆင်နှင့်အတူရှိခဲ့သည့်ဖောင်းပွဘောလုံးထဲတွင်ရှိနေသည်ဟုထင်မြင်မိသည်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်မြွေသည်ဆောင်း ဦး ရာသီ၌လည်းပျက်စီးခဲ့သည်ဟုဆိုကြသည်။ GiGi WuPure ၏မူရင်းသည်ရက်ပေါင်းများစွာကြာရန်ခက်ခဲသည်။ ၎င်းသည်ယခင်ကပြုလုပ်ခဲ့သောအရာများအားလုံးနီးပါးနှင့်တူနေပြီး၊ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးသို့အွန်လိုင်းတင်ခဲ့သည်။
Hiker နှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကြယ်ပွင့် GiGi Wu သည်အခြားတောင်တက်သမားများထံထူးခြားသောနည်းလမ်းတစ်ခုကိုစက်ဘီးစီးခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူမကတောင်တွေကိုတက်နေတုန်းရိုးရာတောင်တက်အ ၀ တ်အစားတွေဝတ်လေ့ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ထိပ်ကိုရောက်တော့သူမဝတ်စုံနှစ်ထည်ကိုဝတ်လိုက်တယ်။ ဝါရှင်တန်ပိုစ့်အဆိုအရကိုယ်တိုင်ကြေငြာခဲ့သော 'bikini climber' သည်တစ်ယောက်တည်းခြေကျင်။ သွားလေ့ရှိရာလူတိုင်းလုပ်သင့်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ တောင်တက်တာတစ်ခုတည်းမှာကိုယ်ပိုင်လုံခြုံမှုရှိတယ်။ အထူးသဖြင့်တောင်တက်သမားမသင့်လျော်တဲ့အဝတ်အစားတွေဝတ်ထားမယ်ဆိုရင်။ ထိုင်ဝမ်အလယ်ပိုင်းရှိယူရှန်တောင်တန်းပေါ်တွင်တစ်ကိုယ်တော်ခြေလျင်ခရီးစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မီတာ ၂၀ ကျဉ်းကျဉ်းသို့ကျဆင်းသွားသည်။ သူမကခြေထောက်ဒဏ်ရာကြောင့်ရွေ့လျားနိုင်ခြင်းမရှိဟုသူကဆိုသည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ကယ်ဆယ်ရေးသမားများသည်တစ်ရက်အကြာတွင်သူမကိုမရောက်ရှိနိုင်ခဲ့ပါ။ Wu သည်သူမကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့သောကြောင့်ဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်သေဆုံးသွားခဲ့သည်။ ဂျိမ်းစ်ဂျိမ်းစ်သည်ရူးသွပ်စွာလေ့ကျင့်မှုမပါဘဲလေယာဉ်ပျံတောင်ပံပေါ်တွင်လျှောက်လှမ်းသင့်သည်။
လူများစွာသည်အန္တရာယ်ရှိသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်နိုင်သည့်လေယာဉ်ပျံတစ်စင်းနှင့်ကစားပြီးနောက်ဒဏ်ရာရခြင်း (သို့) ပို၍ ဆိုးဝါးစွာသတ်ဖြတ်ခြင်းခံရသည်။ Jon James လို့အမည်ရတဲ့ရက်ပ်တစ်ကောင်ကတောင်ပံတစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်နေသည့်တန့်သည်ဂီတဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုထင်ခဲ့သည်။ သူသည်ရဲရင့်သောအပြုအမူအတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့သော်လည်းသူသည်ကျွမ်းကျင်သောစတန့်သရုပ်ဆောင်သူနှင့်ဝေးကွာခဲ့သည်။ သူသည်သေခြင်းကိုကာကွယ်ရန်အတွက်စိတ်ချရသောလုပ်ဆောင်မှုများပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ခဲ့ပါ။
ဂျိမ်းစ်ကလေယာဉ်ပျံကိုထိန်းချုပ်ရန်ပျက်ပြယ်သွားသောကြောင့်တောင်ပံကိုအနည်းငယ်ဝေးသွားသည်ဟုဆိုသည် Cessna ချည်ထားစဉ်တွင်ရက်ပ်သည်ဆက်လုပ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်၊ သို့သော်သူလွှတ်လိုက်သောအခါဂျိမ်းစ်သည်သူ၏လေထီးအားအသုံးပြုရန်မြေပြင်နှင့်နီးကပ်လွန်းလှသည်။ လေယာဉ်မှူးသည်လေယာဉ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးလုံခြုံစွာဆင်းသက်နိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ဂျိမ်းစ်သည်မတော်တဆမှုတွင်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
Owen Hart ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နပန်းသမားများစီစဉ်ထားသည်ကိုလူတိုင်းသိသော်လည်းအမှန်တကယ်အန္တရာယ်မရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်မေလတွင်အသက် ၃၃ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သောပြိုင်ဖက်ပြိုင်ဖက် Owen Hart သည် Kansas City ရှိ KemperArena ၏ရူတာမှ ၂၅ ပေအထိလဲခဲ့သည်။ ဟတ်သည်သူ၏ပွဲမ ၀ င်ခင်နယ်ပယ်သို့ကျရောက်ရန်ရှိသော်လည်း၊
ပရိသတ်များသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နပန်းသမားများ၏ပြဇာတ်ကိုသိသောကြောင့်ပရိသတ်အများက၎င်းတို့သည်ပြပွဲ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုကြည့်နေသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ကြည့်ရှုသူလီယိုဝါရှင်တန်ကနယူးယောက်နေ့စဉ်သတင်းစာကိုပြောကြားသည်မှာ 'သူတို့လမ်းကြောင်းထဲကိုလျှောက်သွားတဲ့အခါသူကဘောလုံးကွင်းထဲကနေထွက်သွားတဲ့ဘောလုံးကစားသမားလိုပဲလူတိုင်းကသူ့ကိုချီးကျူးကြတယ်' တစ်နာရီအကြာတွင်ဟတ်သည်ထိုဆောင်း ဦး ရာသီတွင်ကွယ်လွန်သွားပြီဟုအတည်ပြုသူများကအတည်ပြုခဲ့ကြသည်။
Anastasiya Maximova Cossack Riding သည်တပ်ဆင်ထားသည့်စစ်ဆင်ရေးတွင်အမြစ်များပါ ၀ င်သည့်ဖျော်ဖြေမှုအနုပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ မြင်းစီးသူရဲများသည်မြန်နှုန်းမြင့်သောအရှိန်အဟုန်ဖြင့်လှည့်ပတ်သည်။ သူတို့တောင်များ၏နောက်ဖက်တွင်ပိရမစ်ပုံသဏ္ဌာန်၌ရပ်နေခြင်း၊ ဓားနှင့်လှံများလှည့်စားခြင်း၊ ပြန်လာခုန်။ ပြန်ကြည့်ပါ။ အထူးသဖြင့်အရူးအမူးမဖြစ်နိုင်ပုံရသော်လည်းမကောင်းသောအကြံဥာဏ်များ။
Cossacks သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကျွမ်းကျင်သောမြင်းစီးသူရဲများဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်ယခုလေ့လာသိရှိခဲ့သည့်အတိုင်းကြီးမားသောစွမ်းရည်ပင်လျှင်ပုံမှန်မဟုတ်သောမတော်တဆမှုများမှသင့်ကိုမကာကွယ်နိုင်ပါ။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်အသက် ၂၄ နှစ်ရှိ Cossack မြင်းစီးသူရဲ Anastasiya Maximova ကိုခြေထောက်သည်သူမ၏ခြေဖ ၀ ါးနှင့်ထိမိစဉ်ပြသခဲ့သည်။ မစ်ခ်ျမက်ဗာသည်ပြိုလဲသွားပြီးမြင်းမြင်းမြင်းမြင်းမြင်းကိုစီးကာထိုင်ခုံသို့မပြေးမီဆွဲဆောင်လိုက်သည်။
Maximova သည်ဆေးရုံသို့မပို့မီသူမ၏ဒဏ်ရာကြောင့်သေဆုံးခဲ့သည်။ စတန့်အတွင်းဖြစ်ပျက်သောအဖြစ်ဆိုးများသည်အခြားမည်သည့်မတော်တဆမှုကြောင့်မျှကြေကွဲဖွယ်ကောင်းသည်မဟုတ်သော်လည်းသင်ချစ်မြတ်နိုးသည့်အရာဖြင့်သေဆုံးလျှင်ပြောစရာရှိသည်။ Maximova သည်တစ်ခါတစ်ရံ Cossack စီးနင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုပြောခဲ့သည် -
စကေး၏အခြားအဆုံးမှာ,လမ်းလျှောက်သူနှင့်စက်ဘီးစီးငါးလမ်းသော်လည်းအခြားလမ်းအသုံးပြုသူများအတွက်အန္တရာယ်အနည်းငယ်သာရှိသည်လမ်းလျှောက်သူခဲ့ကြသည်အသတ်ခံရပါဝင်ပတ်သက်အဖြစ်အပျက်များတွင်စက်ဘီးစီးယခုနှစ်အတွက်။ သုံးစုစုပေါင်းလူများမော်တော်ယာဉ်များရှိကြ၏အသတ်ခံရနှင့်အတူတိုက်မှု၌တည်၏လမ်းလျှောက်သူနှင့်စက်ဘီးစီး2019 ခုနှစ်တွင်။05.02.2021
မဂ္ဂဇင်းအပြင်ဘက်၌တံစို့2020 စက်ဘီးစီးသေဆုံးမှုသည်ယနေ့အထိ ၆၇၅ ဦး ရှိသော်လည်း COVID-19 သည်အကူးအပြောင်းကိုဖြတ်တောက်သည်အများကြီးဘလွန်းဘာ့ဂ်၏အဆိုအရလတစ်လတွင် ၄၁ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိသည်ဟုဆိုသည်။12.22.2020
2016 ခုနှစ်, 18.477စက်ဘီးစီး၃,၄၉၉ ဦး အပါအ ၀ င်ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့်ဒဏ်ရာရသူအသတ်ခံရသို့မဟုတ်ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရသည်။ ဤကိန်းဂဏန်းများသာပါဝင်သည်စက်ဘီးစီးသတ်ဖြတ်ရဲကိုတိုင်ကြားသောယာဉ်မတော်တဆမှုများကြောင့်သို့မဟုတ်ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။18.09.2020
ရာသီမည်သို့ပင်, စက်ဘီးစီးသေဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့သည်မကြာခဏ6p.m. အကြား နှင့်9p.m. စက်ဘီးစီးသေဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ပွားသည်မကြာခဏinမြို့ပြေဒသများ (75%) နှင့်ေကျးလက်ေဒသ (25%) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကin2017 စက်ဘီးစီးသေဆုံးမှုများအသက် ၈ နှစ်ရှိပြီကြိမ်အမြိုးသမီးမြားထက်အထီးအဘို့အမြင့်မားin2017 ။
ထက်ဝက်နီးပါးစက်ဘီးစီးသေဆုံးမှုပေါ်ပေါက်ပါတယ်ကျေးလက်လမ်းများပေါ်တွင်။ 80% ၏ပတ်ပတ်လည်စက်ဘီးစီးမတော်တဆမှုပေါ်ပေါက်ပါတယ်မိုlight်းလင်း၌တည်သော - အခါစက်ဘီးစီးအများဆုံးဖြစ်ပျက်သည်။ ကလေးများအတွက်စက်ဘီးစီးသူတို့ရဲ့၏ 90%မတော်တဆမှုများဖြစ်ပွားတစ်နေ့တာအတွင်း။03.11.2017
တစ် ဦး အတွက်အများစုစက်ဘီးစီးသူသေဆုံးမှုများ,အများဆုံးစက်ဘီးစီး ဦး ထုပ်ဆောင်းခြင်း၏အရေးပါမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။
အသက် ၂၀ အောက်လူများကြားစက်ဘီးစီးသူသေဆုံးမှုသည် ၁၉၇၅ ခုနှစ်မှစ၍ ၈၉% ကျဆင်းခဲ့ပြီးအသက် ၂၀ နှင့်အထက်များ၌စက်ဘီးစီးသူသေဆုံးမှုသုံးဆတိုးလာခဲ့သည်။ ၁၉၇၅ ခုနှစ်မှစ၍ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမော်တော်ယာဉ်များမတော်တဆမှုများဖြစ်ပွားခဲ့သည့်အမျိုးသမီးစက်ဘီးစီးသူရဲများထက်အမျိုးသားများသည်စက်ဘီးပျက်ကျမှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့ကြောင်း IIHS ကလည်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
2019 ခုနှစ်တွင်မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးနင်းယာဉ်မိုင်တစ် ဦး လျှင်ပျက်ကျမှုအတွက်ခရီးသည်တင်ကားသမားများထက် 29 ဆနီးပါးပိုများပါတယ်ခဲ့ကြသည်။ မှတ်ချက်။ ။ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပျက်စီးမှုနှင့်ပတ်သက်သောကိန်းဂဏန်းများကိုလည်းအဝေးပြေးလမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအာမခံဌာနမှရရှိနိုင်သည်။
ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်နေ့အချိန်၌စက်ဘီးမတော်တဆမှု ၇၈.၆% ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ၁၅.၁% သည်လမ်းမီးများဖြင့်ညအချိန်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ လမ်းမီးများမရှိသောလမ်းများတွင် ၁.၇% ။ မွန်းလွဲပိုင်းသို့မဟုတ်အရုဏ် ဦး တွင်မတော်တဆမှုများသည်မတော်တဆမှု ၃.၈% ရှိခဲ့သည်။